बालिका देखि बृद्धासम्म बलात्कारको शिकार, के हेर्दैछ सरकार ? - Purbeli News
बालिका देखि बृद्धासम्म बलात्कारको शिकार, के हेर्दैछ सरकार ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक २७, २०७५ समय: ७:३२:२७
ईटहरी / पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा शतप्रतिशत बृद्धि भएको छ । दैनिक रुपमा बलात्कारका घटना सार्बजनिक भईरहेका छन । बलात्कारको घटनाको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो अबस्था छ । दैनिक रुपमा हाडनाता करणी देखि बालिका देखि बृद्धासम्म बलात्कारको शिकार बनिरहेका छन । बलात्कार बढेको भन्दै सरकारले नेपालमा पोर्न साईटहरु बन्द गरायो तरपनि बलात्कारका घटना घटनुको साटो झन बढदै गएको छ ।
कञ्चनपुरमा १४ बर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको १ सय दिन पार भईसक्यो तरपनि अझै बलात्कारमा संलग्नहरुको पहिचान हुन सकेको छैन । निर्मलाका परिवार न्यायको आन्दोलनमा उत्रिएका छन । तरपनि उनीहरुले न्याय पाएका छैनन । सरकार कतिसम्म निरिह रहेको छ यो कुराले पनि प्रष्ट पारेको छ । एउटा बलात्कारीलाई कारबाही गर्नु त के पक्राउ गर्नसम्म पनि सकेको छैन ।
यस्ता बलात्कारका घटना दैनिक रुपमा बढिरहेका छन । यसको पछिल्लो उदाहरण स्वरुप सोमबार मात्र पनि मोरङको कानेपोखरीमा आफनै बाबुद्धारा छोरी बलात्कार भएको घटना सार्बजनिक भयो,सिराहामा बालिका र बृद्धाको सामुहिक बलात्कारको घटना यसैगरी उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–३ लाफागाउँकी १३ वर्षीया बालिका एल्जिना खड्काको बलात्कारपछि हत्याका घटना सार्बजनिक भए । यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन ।
हरेक दिन देशभर आधा दर्जन बढी बलात्कारका घटना सार्बजनिक भईरहेका छन । फितलो कानुनका कारण बलात्कारमा संलग्नहरुले सजिलै उन्मुत्ति पाएका कारण पनि बलात्कारका घटना बढिरहेका छन । बलात्कारमा संलग्नहरुलाई आजीवन काराबास वा मृत्युदण्डको ब्यबस्था गरिने हो भने पक्कै पनि बलात्कारका घटना न्युनीकरण हुन्छ । तसर्थ बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुनु जरुरी छ ।